Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta kulan la qaataay safiirka wadanka ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Devid Concar.
Kulankan uu Madaxweyne Cabdiweli maanta layeeshay danjiraha wadanka Ingiriiska Mr. Devid ayaa waxaa ku wehelinayey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe.
Muhiimadda kulanka ayaa waxaa lagu lafaguray wanaajinta xidhiidhka lada dhinac, abaarta baaxada leh ee ka jirta Soomaaliya gaar ahaan Puntland, taageerada horumarineed ee wadanka Ingiriisku ka fuliyo Puntland iyo shirka dhowaan ka dhicidoona magaalada London ee dalkan Ingiriiska kaasi oo loogaga hadlayo arimo la xiriira horumerinta Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa uga xog waramay danjiraha wadanka Ingiriiska xaalada abaareed ee ka jirta deegaanada Puntland waxaana uu ka dhawaajiyey in maanta abaartu ay marayso meel adag oo ay u dhinteen dad badan oo ku dhaqan dhulka miyiga ah ee degaanada Puntland, halka kuwo kalena ay miciin bideen inay ku soo xeroodaan magaalooyinka iyo tuuloyinka Puntland.
Madaxweyne gaas ayaa tibaaxay in Puntland iyo shacabkeeda oo is garabsanaya ay markasta la garab taagan yihiin gurmad iyo taakulayn dadka baaruhu saameeyeen, waxaana uu sheegay inay tahay wax loobahan yahay in gacan ay ka helaan dadkaasi beesha caalamka gaar ahaan dalka Ingiriiska si loo bad baadiyo dadkaasi u geeriyoonaya macaluusha iyo cunno yarida.
Danjiraha wadanka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Devid Concar ayaa isagana dhankiisa sheegay inay ka qayb qaaddan doonaan gurmadka lagu caawinayo dadka abaaruhu wax yeeleeyeen.
Devid Concar ayaa sidoo kale shaagay in dalka Ingiriisku diyaar u yahay sii wanaajinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Puntland iyo dalkiisa, isla markaana ay si dhow ula shaqayn doonaan maamulka Puntland iyo guud aahaan Soomaaliya.